Uscreen: Video Na-achọ na Native TV App Platform | Martech Zone
Dika ndi okacha amara na ndi okacha amara na acho ikwalite na inweta ego ha nwere n’ime, uzo di ole na ole bu imeghe uzo n’elu onyogho onyonyo n’elu (OTT) ma obu n’ezie itinye ego na iru usoro ihe omume, atumatu ihe omumu, na vidio dabere na ndebanye aha. .
Ngwa oru na akụrụngwa dị mkpa maka ịmalite ngwa ngwa telivishọn, ijikọ ndenye aha, ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, na vidio vidio abụghị ihe dị mfe maka ụlọ ọrụ. O doro anya na, ozugbo ị malitere ngwa ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ga-agbanwe ma chọọ mmepe ọzọ. Nke a bụ ihe kpatara azịza SaaS maka Video-On-Demand bụ nhọrọ zuru oke.
Uscreen Video Na-achọ (VOD)
N'ezie, enwere ebe a rụrụ maka naanị nke a ka ị mee. Ihuenyo enyerela aka karịa ndị na-eme vidiyo vidiyo 5000 wuo ma mekwaa obodo VOD ha. Ha abughi nani ulo oru na-enye ikpo okwu, ha bukwa okacha amara nke ndi okacha amara n’ulo oru nyere gi aka idi nke oma.
Uscreen VOD Atụmatụ
Mepụta ngwa ngwa VOD mara mma ngwa ngwa - Ẹkedori gị video on ina ọrụ dị nnọọ ole na ole dị mfe nzọụkwụ, iji ihe ọ bụla nke pụtara Uscreen video mkpokọta isiokwu na ndebiri. Enweghị koodu ịchọrọ.
Mepụta ụdị ọnụahịa gị pụrụ iche - Optionally melite ndenye aha, mgbazinye ma ọ bụ otu oge aka ekedep maka ohere gị VOD. I nwekwara ike iji Kupọns na nkwalite iji mepụta ahụmịhe naanị maka ndị debanyere aha gị. Kachasị mma, ụdị ọnụahịa Uscreen abụghị ego na-akpata.
Nweta ngwa ọdịnala nke aka gị maka ekwentị mkpanaaka na TV - Napụta ọrụ VOD gị n’ebe ọ bụla ndị na - ele gị chọrọ ya. Ẹkedori OTT ngwa ọdịnala na ihe ọ bụla mobile ngwaọrụ ma ọ bụ smart TV, gụnyere iOS, Android, Roku, Amazon Fire, na Apple TV.
Atụmatụ ndị dị na atụmatụ niile gụnyere ikike ịnabata ịkwụ ụgwọ n'ụwa niile, njikwa nnweta geo-igbochi, na-agbakwunye ndepụta okwu, nkwanye na-akparaghị ókè, ndenye ọpụpụ SSL, nchekwa CDN zuru ụwa ọnụ, na-akparaghị ókè bulite, oge 99.9%, yana enweghị nkwa nchekwa.
Bido na Uscreen n'efu!
Ngosipụta: Ana m eji njikọ njikọta maka Ihuenyo Ebe a.
Tags: Amazon Fireandroidiosala tv ngwaafọvideo na ina